etu ọnụ Wallpaper — njem Lee - Official Site
Mkpa a kwa ụbọchị ncheta na ị bụ wuru na-etu ọnụ? Anyị na-na na-etinye ọnụ a ole na ole akwụkwọ ahụ aja maka ekwentị gị, mbadamba, ma ọ bụ nelu ihuenyo. E nwere atọ dị mfe nhọrọ n'okpuru na-etu ọnụ logo. E nwere ihe ọzọ na-abịa mgbe e mesịrị. enwe!
Download iPhone akwụkwọ ahụ aja • Download iPad akwụkwọ ahụ aja • Download desktọọpụ akwụkwọ
David • April 9, 2014 na 2:52 pm • zaghachi
Daalụ maka free downloads. Chineke gọzie gị na ezinụlọ gị na ije ozi.
inan † • April 12, 2014 na 5:04 pm • zaghachi
Daalụ maka na akwụkwọ ahụ aja dị egwu. hụrụ ha n'anya. E nwere nnọọ ihe ka ukwuu pụtara na ha karịrị nnọọ etu ọnụ, ma etu ọnụ na Otu Ezi King, Jesus. -anọ gọziri agọzi. †
Lee • April 16, 2014 na 5:45 pm • zaghachi
Daalụ maka akwụkwọ ahụaja. M ele anya ruo gị ma na-ekiri gị ọ bụla enyo. Ana m ekele Chineke na gị dị otú ahụ a mma romodel
kpọchie • June 9, 2014 na 12:54 pm • zaghachi
Enwere m asị Njem, M na-n'ezie gọzie everytime m ege gị ntị, nwere ike na ebube Chineke na-enwu n'ime you'r ndụ na ezinụlọ gị si forver. Mkpa m asị gị nwoke bụ otu n'ime luckiest na mbara uwa. Ọ bụ n'ezie bụghị a robot. #116 #rhemaprocess @iamslizybolt
Pamela • August 29, 2014 na 5:59 pm • zaghachi
Daalụ njem. Okwu gị abụghị nanị na-enye Chineke otuto ma ha nyere m aka ịnọgide na-elekwasị anya ná mmekọrịta mụ na Ya. ịhụnanya dị ukwuu.
Chris • September 12, 2014 na 4:43 pm • zaghachi
hey dị egwu, nnukwu onye ofufe, Chukwu gozie gị. Anyị bụ ndị otu onye n'ime Kraịst.
irenesalcedo • September 23, 2014 na 4:52 pm • zaghachi
Aha m bụ Irene Salcedo, M na-eje ozi na United States Army na m m guzo na Fort Bliss, TX. Abụ m otu n'ime gị nnukwu fans.This afọ My nne a chọpụtara na ogbo 4 Lymphoma Cancer. Mgbe ọ na mbụ ekpuchi, ndị dọkịta kwuru na ọ bu n'oge a ogbo 2, ha malitere Chemo n'imeso ya maka ogbo abụọ. Nso nso ha tụnyere ndị nke na-esite mbụ screening, ha wee sị bụ a ogbo 2, bụ n'ezie a ogbo 4. Ọ bụ ha mere n'amaghị ama. My nne a ka na-emeso n'ihi na ogbo 4 ma ka na-aga site chemo. Ozugbo chemo bụ ihe karịrị ọ ga-amalite radieshon, na anyị nwere ike ịbụ gburugburu ya maka ememe. All na m na-arịọ nke unu, bụ ikpe ekpere maka ahụ ike ya. Ọ bụ otu ohu Chineke na egosiwo m sibilings na onwe m bụ ụzọ nile nke Onye-nwe. Na-echetara anyị kwa ụbọchị na Chineke na Control, M nnọọ arịọ na ị dị nnọọ na-enye gị ekpere, Aha ya bụ Yvonne Castro.
Julia ụlọ akwụkwọ ji agwụ • October 14, 2014 na 9:38 Abụ • zaghachi
All m mkpa bụ 1:16 na-etu ọnụ na Onyenwe m, etu ọnụ na m King. Ekwu okwu banyere 'im kwa ụbọchị n'ihi Ọ na-agba ihe a! Daalụ maka akwụkwọ ahụaja, njem!
ị na-ahọrọ • December 6, 2014 na 4:49 Abụ • zaghachi
thankz onyeisi, now m dextop ndabere anya etu ọnụ….